Xildhibaano ka noqday mooshinkii Shariif Xasan – Balcad.com Teyteyleey
Xildhibaano ka noqday mooshinkii Shariif Xasan
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay ka laabteen mooshin ay ka keeneen Madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Kulamo ka dhacay magaalada Baydhaba ee xarunta KMG u ah maamulka Koonfur Galbeed oo ay lahaayeen Mudanayaasha Baarlamaanka maamulkaasi ayaa sabab uga dhigay dib uga laabashada mooshin ay ka gudbiyeen Madaxweyne Shariif Xasan, iyagoona sheegay inay dib u dhigeen ilaa inta dalka uu ka baxayo xaaladda uu ku jiro.
Xildhibaanada ayaa waxay kaloo tilmaameen in dalka uu ku jiro xaalad dagaal oo ku wajahan ururka Al-Shabaab, taasi oo ay sheegeen in xilligaan loo baahan yahay sidii looga midoobi la dagaalanka Al-Shabaab isla markaana loo dejin lahaa xaaladda siyaasadeed ee ka jirta gobolada hoos yimaada maamulka Koonfur Galbeed.
Sababta keentay isbaddalka mudanayaasha iyo dadaal la doonayo in lagu qaboojiyo xiisaddaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena Muqtaar Maxmed Catoosh weriyaha laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da.
The post Xildhibaano ka noqday mooshinkii Shariif Xasan appeared first on Ilwareed Online.